UMkhalele uphatheke kabi ngokwehluleka kwaMajita ukungena kwi-Afcon | Scrolla Izindaba
UMkhalele uphatheke kabi ngokwehluleka kwaMajita ukungena kwi-Afcon
Umqeqeshi weqembu lesizwe labaneminyaka engaphansi kwengama-20 laseNingizimu Afrika uHelman Mkhalele uthi, ulimele kakhulu kulandela ukwehluleka kwaMajita ukungena kwi-U/20 African Cup of Nations (Afcon) ngonyaka ozayo.
I-‘Midnight Express ’njengoba uMkhalele ayebiziwe khona uthe, abadlali balahlekelwe yithuba lokuqhudelana esigabeni sezwekazi namaqembu ahamba phambili.
Ubheka ukuthi lokhu bekungaba yindawo yokufunda kanye nenkundla enhle yabadlali yokuchayeka nokwenza ngcono ngesikathi ebasiza njengabaqeqeshi ukuthola amasu amasha kozakwabo.
“Kubuhlungu ngendlela enkulu ngoba sesizenzele isiko naMajita lokuqinisekisa ukuthi siyafaneleka noma yimuphi umqhudelwano wentsha esiwutholayo, kodwa kulokhu sihlulekile – asikwazanga ukungenela kanti futhi lokhu kusibuyisela emuva,” kusho uMkhalele etshela uRobert Marawa kuMarawa Sports Worldwide (MSW).
Uthi, abafana abancane babebukeka bezimisele kodwa isici sabo sobuchwepheshe namasu kwaba ukwehla kwabo okukhulu ku-COSAFA Cup.
Amajita abedinga ukushaya iMozambique ngoLwesibili ukuze akwazi ukuthola indawo kodwa adlale ngokulingana.
UMkhalele uphinde wasola umthelela we-coronavirus (Covid-19) ethi lokho kube nomthelela kumalungiselelo abo okuya kulo mqhudelwano kodwa wafunga ukuthi uzosebenza ngokuqinile kubafana ukuze benze kangcono ngokuzayo.
“Ngikholwa wukuthi abadlali banikele ngakho konke, kodwa bekunganele. Amalungiselelo ethu abe nomthelela omkhulu ngenxa ye-Covid-19 ngoba amaqembu amancane awanikwanga ithuba lokuziqeqesha nokubamba iqhaza emidlalweni ebishubile ngaphambi kokuba kuqale umqhudelwano futhi lokho kusithinte kakhulu,” engeza.
UMkhalele uthi, ubeneme ngokudlala jikelele futhi ukholelwa ukuthi bekushoda abalandeli ngoba uma bevunyelwa ezinkundleni, imiphumela ibingahluka.
Akasifihlanga isifiso sakhe sokuqhubeka nendima yakhe yamanje ukuze aqinisekise ukuqhubeka.
Kodwa-ke, kulele kwi-South African Football Association (SAFA) ukuthi yenze isinqumo esingujuqu ngekusasa lakhe.